पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईले यसरी पचाइदिए एउटा दलितको पाँच लाख – YesKathmandu.com
बुधबार ०५, माघ २०७३
रुपमा कम्युनिष्ट सारमा सामन्ती रहेछन उनी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रिटार्यड भएका वुद्धिजीवि,कानुनी क्षेत्रका ज्ञाता,माले पार्टीका पोलिव्युरो सदस्य समेत रहेका यीनै भूपु मन्त्रीको सामन्ती व्यवहारबाट म घर न घाटको भए ।
जीवनका उर्जाशील समयमा खाँडी मुलुकमा पुगेर कमाएको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाए र मेरो पैसा उडाइदिए । मेरा साना दुई लालाबालाको विचल्ली बनाइदिए,आशुँ र श्राप लाग्नेछ जीवनभर मेरा सन्तानको पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईलाई ।
म दुर्गा परियार,लमजुङ,बेसीशहरमा जन्मेको एउटा दलितको बच्चा । जिल्लाको नाममा मसँग सिर्फ एउटा नागरिकताको प्रतिलिपीबाहेक अरु केही छैन । विवाहबारी गरेर श्रीमतिको कोखमा बच्चा हुर्कदै गर्दा म पुगे खाडी मुलुक । साढे तीन वर्ष त्यहाँ पसिना होइन रगत बगाए । र फर्किए स्वदेश । यो त्यही समयको कुरा हो । जुन समय नेपालको राजनीतिमा एउटा कम्युनिष्ट सरकार ढालेर अर्काे कम्युनिष्ट सरकारको उदय हुँदैथियो अर्थात झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाको समय ।
यही मन्त्रीमण्डलमा अडाए माले महासचिव सिपि मैनालीका कान्छा मामा खगेन्द्र प्रसाई उनी संष्कृति तथा पर्यटनमन्त्री भए । उनका पिए नारायण पोखरेल । उनैले हो आग्रह गरेको विदेशको ठाँउमा गाडी चलाएर आएको मान्छे,त्यसमाथि दलित समूदायको व्यक्तिलाई राख्दा हामीलाई पनि राम्रो पार्टीलाई पनि । त्यही सोचेर उनले मलाई मन्त्री प्रसाईको गाडी चालक बस्न आग्रह गरे ।
मेरो अहोभाग्य,सोचे अब विदेशिन्न यही माटोमा सुन फलाउछु । मन्त्रीको सेवा गर्ने अवसर पाएसँगै जाहान बच्चा काठमाडौं नै ल्याए । तर,झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार पाँच महिना नपुग्दै ढल्यो । स्वभाविक थियो,मन्त्री गएसँगै मेरो नोकरी पनि धरापमा प¥र्यो । मन्त्रीपदबाट खुस्किएको पाँच सात दिन पछाडि उनै खगेन्द्रले मेरो जग्गा छ भक्तपुरमा हेर्न जाउ भन्ने आग्रह गरे । गाडी चलाउदै म सीपाडोल तिर लम्किए । त्यहाँ जाँदा उनकी श्रीमती मीरा प्रसाई पनि साथमै थिईन । खै के भएर हो मीरा जग्गा आइपुग्नु भन्दा अगाडि ओर्लिन । खगेन्द्र र म जग्गा भएतिर गयौं । त्यहाँ पुगेपछि उनले जग्गा देखाए । केही आफ्नो र केही साथीको । जग्गाको चल्तीको मूल्य ४ लाख तर मैले लिने भए दुई लाख आनामा दिने आश्वासन देखाए ।
खाँडी मुलुकमा गएर कमाएको धेरै थोरै पैसा थियो । काठमाडौंमा जग्गा किन्न पाए हुनेथियो भन्ने त लागिरहेको थियो । मैले जग्गा किन्ने निर्णय गरे । उनले मेरो ढाडमा धाप मार्दै भने मेरो एउटा छोरा थियो,आजबाट दुईवटा छोरा भए । तिमी पनि मेरा छोरा नै भयौं । मेरो सदियार भयौं । मन त्यसै त्यसै पुलकित भयो । तत्कालै हिमालयन बैंक ठमेल शाखामा पुगे । उनले भने बमोजिम दुई लाख रुपैंया ल्याएर उनलाई दिए । कागजात लेखे बसन्तराज स्याङतानले,मलाई भनिएको थियो त्यो जग्गा उनै बसन्तको हो ।
कागजको प्रतिलिपी मसँग अझ पनि सुरक्षित छ । सिन्धुली आमले बस्ने श्यामकाजी स्याङतानलाई घरखर्च चलाउन र उपचार गर्न पैसा आवश्यक परेको हुँदा रु दुई लाख ऋण लिएको छु । उक्त रुपैंयाको बोल कबोल के थियो भने भक्तपुर सिपाडोल ९ को कितानम्बर १२९८ को उत्तर पश्चिमपट्टी १० फिट कच्चीबाटो भएको ४ आना जग्गा लिने र उक्त जग्गाको बैनास्वरुप दुई लाख रुपैंया लिएको कागजात बनाए साक्षी बसे उनै मन्त्री प्रसाई । त्यसको केही समय पछाडि घर बनाउन पैसा चाहियो मेरो छोरा अष्ट्रेलियामा छ, उस्ले अर्काे महिना पैसा पठाँउछ त्यतिन्जेललाई पैसा सापटी देउ भने फेरि उनलाई लगेर अरु साढे दुई लाख रकम दिए ।
यता,कागजात गर्दा भनिएको थियो,जग्गा पौष महिनाभित्र रजिष्ट्रेसन पास गराइदिने । दिन,हप्ता महिना गर्द कार्तिक मंसिर पौष बित्यो । तर,जग्गा पास गराउनेबारे न त खगेन्द्रले चासो देखाए न त श्यामकाजीले । पटक पटक खगेन्द्रसँग आग्रह गरे । कहिले के भनेर टारे,कहिले के भनेर झुलाए ।बारम्वार उनी कनि आत्तिएका छौं भइहाल्छ भन्थे ।
मन्त्री भइसकेका मान्छे,समाजका गन्यमान्य,त्रिविवि,कानुनी सेवामा समेत नोकरी गरेका मान्छे । राज्यका हरेक अङ्गले चिनेको र पूजेको मान्छे मलाई सयमा एक प्रतिशत पनि शंका थिएन कि यीनले म माथि गद्धारी गर्लान भनेर । तर,सधैंको आलटाल आलटाल भएसँगै मनमा अलिकति चिसो पस्यो । मालपोतमा पुगेर जग्गा रोक्का गर्न खोजे । त्यहाँ पुग्दा पो छाँगाबाट खसेजस्तो भए तीनलाई मलाई जुन जग्गा देखाएका थिए । त्यो जग्गा त कीर्ते रहेछ । श्यामकाजी स्याङतानको नाममा भएको भनिएको जग्गा धर्मरत्न शाक्य,सूर्यरत्न शाक्यहरुको नाममा ।
यो बीचमा गोपाल किराती,नारायण खड्काहरु मन्त्री बनेर आए । तीनका सवारी चलाए । तर,आफूले खाडीमा कमाएको पैसा मन्त्रीले यसरी मेरो सोझोपनको फाइदा उठाएर फकाइ फुलाई उडाए पछि मसँग अरु उपाय केही थिएन साथीहरुको सल्लाहमा उनीहरुकै पार्टि कार्यलयमा यो सम्बन्धमा निवेदन दिए । केही सुनुवाई भएन । म चाहन्थे मन्त्री भइसकेका मान्छेको वेइज्जती नहोस । तर इज्जत हुनेलाई नै हो वेइज्जतको डर हुने जस्को इज्जत नै छैन उस्लाई बेइज्जतको के को डर हुँदो रहेछ र ? कहिँबाट केही तार नलागे पछि अन्तमा कानुनी बाटो रोजे मुद्धा हाले । नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेको यी विद्धानलाई ६९ सालको वैशाख १२ गते प्रहरीले पक्राउ गर्र्यो । । अर्काे ठग बसन्त स्याङतान फरार रहे ।तर,सानालाई ऐन,ठूलालाई चैन भएको मुलुक न पर्र्यो । नौ सिङे कानुनले प्रसाईलाई धरौटीमा छोडिदियो । म जस्ता एउटा श्रमिकको पाँच लाख रुपैया मेरो रगत पसिना चुसेर मोटाएका खगेन्द्र प्रसाई दुई लाख धरौटीमा रिहा भए । न्याय पाउने सपनामा तुषारापात लाग्यो ।
सर्वहारा वर्गको हितका खातिर राजनीति गरेको एउटा कम्युनिष्ट नेताबाटै म जस्तो एउटा गरिब,विपन्न र दलित समूदायको मान्छे यसरी लुटिए बर्बाद भए । मेरा सपनाहरु चुडिए,खाँडी मुलुकमा तीन वर्षसम्म मैले बगाएको रगत र पसिनामा भुपुमन्त्रीले रजाइ गरे । उनले मेरो मात्र होइन आफ्न साली मञ्जुको समेत पाचौं लाखभन्दा बढी रकम खाइदिएका रहेछन ।
मैले मुद्धा दायर गरेर पूर्व मन्त्री प्रसाई जेल पर्दा उनको श्रीमती मीराको भनाई सुन्दा म अझैं छक्क परे । उनले ‘मलाई किन मुद्धा हालिनस’ भन्दै सोधेको थिईन ।
यो विषयलाई लिएर मैले पटक पटक माले महासचिव सिपि मैनालीलाई भेटे । प्रसाई सिपिका कान्छा मामा हुन । उनले पनि एक कानले सुने अर्काे कानले उडाइदिए ।
अहिले म खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव शंकर प्रसाद सुवेदीको गाडि चालक छु । करारको जागिरे । मासिक अठार हजार हात पर्छ । महिनाभर काम गर्र्यो । हालत उही चिल्लै हुन्छ । विदेशमा खटिइन्थ्यो मासिक नब्बे हजारको हाराहारी कमाइन्थो । छुट्टीमा घर आएको समयमा मन्त्रीको गाडी चलाउने काम मिल्यो । तर,फसे उठ्नै नसक्ने गरी । लुटिए चुसिए एउटा नामको कम्युनिष्ट व्यवहारको सामन्तीबाट । म जस्तो निमुखाको रगत र पसिना चुसेर ढाडिएका खगेन्द्र अहिले झापातिर पुगेका छन । पैसाका लागि तारान्तार फोन सम्पर्क गर्दछु कहिले सम्पर्कमा आँउदैनन ।
म र म जस्ता कति गरिबका रगत र पसिना चुसेका होलान यीनले ? आफ्ना छोरा छोरीलाई हामीजस्तै गरिबको रगत पसिना चुसेर अष्टेलियामा पढ्न पठाएका छन । पाप त एक दिन लाग्छ नै खगेन्द्र सर । ढिलो चाँडो पापको सजाय भोग्नै नै छौं । मेरा दुई अबोध छोरीहरुको आशुले र मेरा श्रापले तिमीलाई जिन्दगीभर पोल्नेछ । जिन्दगीभर ।
दुर्गा परियार,हालः खानेपानी मन्त्रालय
यो सामाग्री हामीले जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरेका हौं ।
बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रचार गर्नलाई सरकारले दियो उन्मुक्ति
One thought on “पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईले यसरी पचाइदिए एउटा दलितको पाँच लाख”
खै के भन्ने र , यस्ता पापी हरु कै भलो भईरहन्छ , तै पनि आशुले ति पापीहरु लाई श्राप लागोस
तीन दल ओली क्याम्प छाडेर लागे कोइराला तिर
तराईमा देखिएको समस्या तत्काल वार्ता र संवादबाट हल गरः आयोग
विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुने को–पाइलट एमाले नेता तथा पुर्वमन्त्री दलबहादुर रानाका छोरा
बाबुरामले भने— स्वच्छ ,पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिको विकासमा लाग्छु
बाम गठबन्धनको घोषणा- २० हजार मेगावाट बिद्युतदेखि बुलेट रेलसम्म
आफूविरुद्धको जाहेरीबारे के भन्छन नवराज सिलवाल ?